Ogaden News Agency (ONA) – Sanad guuradii 29aad ee JWXO oo lagaxusay xerada dhagaxlay
Sanad guuradii 29aad ee JWXO oo lagaxusay xerada dhagaxlay
Posted by ONA Admin	/ August 17, 2013
Sanad guuradii 29aad ee aas aaska JWXO kasoo wareegtay oo laga xusay xerada dhagaxlay.
Maalinimadii ay taariikhdu ku beegnayd 15/08/2013 waxaa xerada qoxootiga dhagaxlay ee deegaanka dhadhaab lagu qabtay xaflad aad ubalaadhan oo lagu maamuusayay aas’aaskii jabhada wadaniga xoraynta ogadeenya (JWXO). munaasabadan oo ahayd mid aad loosoo agaasimay waxaa soo qorsheeyay islamarkaana daadihinayay maamulka faraca jaaliyada soomaalida ogadeenya MIDNIMO ee xerada dhagaxlay.
Munaasabada ayaa bilaabatay abaare 10:00 barqinimo waxaana lagu furay sidii caadada ahayd Aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah, waxaana makarafoonka lagu soo dhaweeyay sheekha deegaankan ugu magaca wayn ahna qaadiga magaalada sheekh shamsudiin. Sheekha ayaa ku dheeraaday wacdi dhinacyo badan taabanayay. Intaa kadib waxaa la guda galay ajandayaashii loogu talagalay xaflada oo ay wada jir udaadihinayeen gudoomiyaha jaaliyada halgame Axmad daahir iyo xoghaya jaaliyada halgame c/laahi xildiid.
Waxaa ugu horaynba goobta laga akhriyay taariikh halgamadkii shacabka ree ogadeenya ay soo mareen oo ka kooban laga soo bilaabo xiligii imam axmad guray, Daraawiishtii, xiliyadii jabhadihii Nasrulaahi iyo WSLF iyo wali halgankan hadda socda ee ay caynaanka u hayso jabhada wadaniga xoraynta ogadeenya. Intaa ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay mid kamid ah halgamayaasha CWXO oo socdaal ku joogay deegaanka dhadhaab, wuxuuna warbixin aad u dheer ka dhiibay guud ahaan Ogadeenya iyo meesha uu halganku maanta marayo, isaga oo ifiyay in cidkasta oo gudaha wadankii ku nool ay u udgayso saxansaxada xoriyaddu. Sidoo kale waxaa lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha odayaasha ree ogaadeenya Mudane Saxane, wuxuu odaygu aad uga hadlay waxuu usoo joogay, wuxuuna ka warbixiyay dhibaatooyinkii ay talisyadii Ethiopia soomaray u gaysteen shacbka Soomaalida Ogadeenya, wuxuuna sheegay xiligii xayle salaase in uu u soo joogay illaa iyo xiligii Mingistu iyo waliba xiligan ay TPLF tu wadanka haysato.
Mudanahan ayaa sheegay in uusan hal subax ah wuxuu ku farxo uusan arag maqala. Wuxuu odaygu aad u guubaabiyay dhalinyaradii madasha fadhiday oo uu ugu baaqay in ay wadankooda siday wax uga badali lahaayeen falowgeeda galaan.
Intaa kadib waxaa lagu soo dhaweeyay Marwo Bishaaro C/lahi oo u hadlaysay dumarka islamarkaana ka mid ahayd wufuudii ka timid xerada Xagardheere waxayna madasha kasoo jeedisay hadalo aad qiiro leh oo dadkii madasha fadhiyay dhiigooda kiciyay.
Ugu danbayn waxaa lagu soo dhaweeyay Abwaan c/laahi Aadan sh maxamad ( JWBO) Iyo kooxdiisii HILAAC oo soobandhigay riwaayad heeso aad uqiimo badan oo farxad iyo khushuuc galiyay dhamaan dadkii faraha badnaa ee xaflada ka soo qaybgalay
Geeskasta ka eeggoo xaflada ayaa soo gaba gabowday abaare 2:00 duhurnimo waxayna kusoo kaba gabowday guul iyo wajiyo farxadeed